Baarlamaanka oo meel mariyay Hindise sharciyeedka guddiga xuduudaha iyo Federaalka – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo meel mariyay Hindise sharciyeedka guddiga xuduudaha iyo Federaalka
Kalfadhiga Shanaad fadhiisa 21aad ee maanta oo ay soo xaadireen 145 mudane, isla markaana uu shir guddoominayay Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxaa looga hadlayay labo ajande oo kala ah meel marinta Hindise Sharciyeedka Guddiga Xuduudaha iyo dhageysiga warbixin la xiriirta dilalka Xildhibaanada oo ay mudanayashu ka dhageysteen Taliyaha hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Furitaanka kulanka kaddib ayuu guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Arrimaha gudaha iyo Amniga ee Baarlamaanka Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Xildhibaanada u cadeeyay in wax ka badal lagu sameeyay Hindise sharciyeedka guddiga Xuduudaha iyo federaalka.
Intaa kaddib ayuu guddoonka baarlamaanka ka codsaday mudaneyaasha inay cod geliyaan, waxaa ogolaatay 129 mudane, halka 13 mudane ay ka soo horjeesteen, waxaana ka aamusay hal mudane, sidaasi ayuuna ansax ku noqday Hindise sharciyeedka Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka.
Siihayaha Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Xildhibaannada uga mahadceliyay meel marinta hindise sharciyeedka Guddiga xuduudaha iyo shaqaalihii soo diyaariyay hindise sharciyeedkan.
Intaas kaddib Xildhibaannada ayaa waxa ay gudaha galeen ajandaha labaad ee kulanka oo ah dhageysiga waxa ay hay’adda Nabad sugidda ka qabatay dilalka Xildhibaannada loogu geystay Muqdisho.
Taliyaha Hay’adda NISA Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in hay’addu ay bur burisay labo shabakadood oo ay Shabaabku ku lahaayeen Muqdisho, kuwaasi oo geysan jiray dilalka Xildhibaannada iyo dadka kale ee bulshada wax galka u ah.
“Labada shabakadood ee la bur buriyay waxaa ka howlgeli jirtay 11 qof, oo sideed ka mid ah gacanta lagu hayo, halka saddexda kale ay baxsadeen oo ay ka carareen magaalada Muqdisho” ayuu yiri Taliye Tuuryare.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka mudane Mahad Cabadalla Cawad aya soo xiray shirka baarlamaanka ee maanta.
Gaari xamuul ah iyo hub ku rarnaa oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Nabad sugidda Qaranka